Muxuu Kansarka Ugu Badan Yahay Wadamada Qaboobaha ah? | Xaqiiqonews
Muxuu Kansarka Ugu Badan Yahay Wadamada Qaboobaha ah?
Daraasad ayaa dhawaan soo saartay natiijo “kadis ah” oo dood badan dhalisay ka dib markii ay sheegtay xiriirka ka dhaxeeya cudurka kansarka iyo jawiga qaboowga ah.
Baarayaal ka tirsan jaamacadda “West Chester University” ee ku taal gobolka Pennsylvania ee Mareykanka ayaa xaqiijiyey in jiro xiriir “toos ah” uu ka dhaxeeya goobaha qabooobaha iyo roobka, iyo faafitaanka noocyo ka tirsan cudurka Kansarka.
Saynisyahanada ayaa horay u aaminsanaa fikir ah in falaaraha qoraxda ay sababaan kansarka maqaarka, hase yeeshee daraasaddan cusub ayaa farta eedda ku fiiqday qabowga iyo goobaha roobka in ay yihiin meelo kansarka ku badan yahay marka loo barbardhigo degaanada kuleelka ah.
Daraasadda ayaa tusaale u soo qaadatay heerka dhimashada kansarka e ee gobolada kala duwan ee Mareykanka, waxa ayna daraasaddu tiri gobolada ugu badan ee kansar loogu dhinto Mareykanka waa gobolada saaran xeebta bari ee aadka u qabow.
Sidoo Kale Aqri Robotkani Waxaa Lagu Daweyn Doonaa Kansarka..Fikrad Cusub
Inkastoo sababaha Kansarka ku yimaado ay fara badantahay, daarasadda ayaa “jawiga qabow” ka dhigtay mid ka mid ah asbaabaha kansarka.
Sidee Qabowga U Sababaa Kansar?
Sida Xaqiiqonews ay ka soo tarjuntay Medical News Today, jirkeenu waxa uu leeyahay difaac jireed ka hortagga cudurka Kansarka kaasi oo loo yaqaan T Cell, haddaba saynisyahanada ayaa aaminsan in difaaca “T Cell” uu aad u shaqeeya marka jawiga uu kululyahay.
Dhanka kale tijaabooyin lagu sameeyey noolayaal kansar qaba oo uu ka mid yahay dooliga ayaa lagu ogaaday in dooliga markii uu helo heerkul fiican oo gaaraya 38°C digrii in uu dareemo reereyn,waxaa sidaasi la mid ah bani’aadmiga, taasina waa sababta saynisyahanada ay u xiiseynayaan in ay ogaadaan xiriirka ka dhaxeeya KAnsarka iyo Jawiga Qabow.